Cadaalada Madaxweyne Farmaajo? Dilkii Siraaji iyo Xukunka toogashadda Askari Caydiid
Tuesday June 20, 2017 - 10:25:23 in Articles by Super Admin
Ugu horeyn Alle ha u naxariisto Siraaji. Waxanan halkan ku cadeynayaa in aan ka xumaaday dhacdadaa lagu waayey wiilka da'da yaraa ee mustaqbalka fiican lahaa.
Markii aan maqlay dilkii Wasiir Siraaji, warkaasi sidan ayuu igu soo gaadhay.
1.Wasiir yarihii Siraaji oo geeriyooday
2. Ilaalada Hantidhawraha oo toogatay
3. In Wasiirku baabur nooca raaxada gacantiisa
4. In hal Askari ilaalo u ahaa oo xaga dambe
Ka saarnaa Baabuurka wasiirku watay
5. In labada baabuur isku soo dhawadeen
6. In ilaalada Hanti dhawruhu ka shakiyeen
gaadhigan yar ee ku soo dhawaaday.
7. In Ilaalada hati dhawrku marka xabad u digis ka dul rideen gaadhiga yar ee Wasiirku watay iyagoo uga danlahaa in u ka fogaado.
8. In Askarigii wasiirka la socday u rasaas baabuurkii hanti dhawraha huwiyey.
9. In ilaaladu xabadu ugu jawaabeen.
10. In wasiirku sidaa ku geeriyooday.
Markaan maskaxdayda yar la kaashaday warka 10 qodob ahaa.
Waxa ugu horeyn aan u arkay in qaladka dhacay ahaa
1. In Wasiirku gaadhiga gacantiisa ku kaxaysto, madama aynu ognahay in aan amaanka magaaladu sugnayn isla markaana anu tabo bar u lahayn sida la isku badbaadiyo marka xaalado adag yimadaan, waayo Dirawalada waxa la siiyaa tababar ay ku badbaadshan naftooda iyo cida ay ka masuulka yihiinba.
2. Gaadhiga u watay oo aan aheyn baabuur Masuul sare ku socdaalo oo ahaa noocan badanaa shicibku wataan isla markana looga shakiyi karo nooca mucaaridku qaraxyada ku geystaan.
3.In wasiirku wadan baabuur kale oo cover ah iyo Ilaalo badan oo lagu aqoonsado in u yahay masuul qaran.
4. In askariga kaliya ee wasiirku ka jawaabo xabadaa digitaanka aheyd.
marka u arrin sidaa yahay,
bal aynu eegno sida ay u jawaabi karaan ilaalada Hanti dhawrku.
1. Ilalada hanti dhawrk waxay ka shakiyeen baabuurka uso dhawaaday
2. Waxay ku rideen xabad ay ugu digayeen
3. Rasaas markii la huwiyey waxay u aqoonsadeen baabuurka wasiirka cadaw madama ay markii horeba ka shakisanayeen.
Marka arrin halka marayo
Maxaa dhici kara?
1. In ilaalada Hanti dhawruhu iska caabin galaan
2. Rasaas furaan
3. Isku dayaan in ugu horeyn iska dilaan dirawalka baabuurka laga soo xabadeeyey si aanay u suurto galin in bàabuurka yari soo beegsado baabuurka hanti dhawraha oo isqarxin u dhicin , isla markaana iska difacaan cida soo toogatay.
Marka sidaa arrin yahay.
Hadaba suaashu waxay tahay in la isweydiiyo Ilaaladu khalad ma ku leedahay dhacdadaa madama self defence dilku ku yimid oo aanay arrintu aheyn dil si toosa loola beegsaday wasiirka oo qorshaysnaa.
Markan oo kale miyaan la odhan jirin #friendly fire ayaa cidaasi ku dhimatay madama magaalada Mogadisho tahay goob dagaal.
MUXUU SE NOQONAYAA XUKUNKA LAGU RIDAY ASKARIGA LAGU EDEEYEY INU DILKA WASIIRKA GEYSTAY?
DHAGEYSO:Wararkii ugu Dambeeyay ee shirka Kismaayo iyo Axmed Madoobe oo Fariin u Diray Dowladda Farmaajo?
horde Full Article
MUDANE MADAXWEYNE SOOMAALIYA XAGEE U SOCOTAA?! Maqaal uu qoray Xildhibaan caana
Waxaan halkaan idinkugu soo gudbinayaa maqaal aan ugu talo galay inaan ku iftiimiyo qayb kamid ah qaladaadka joogtada ah ee qaar kamid ah Madaxda Qaranku ka galayaan Dalkii iyo Dadkii ay mas'uuliyada uhayeen. Si loo saxo, Dowladuna aysan dhumin kalsoonidii Shacabka Soomaaliyeed u muujiyeen Doorashadii Madaxweynaha, Magacaabistii Ra'iisul Wasaaraha iyo Dhismihii Xukuumada. Kalsoonidaas oo hadii aan la'dabo qaban ay suurtogal tahay in ay noqoto LA MOOD NOQONSE WEYDAY! Full Article
Topnews:- Madaxweyne Farmaajo oo beentii ugu weeyneed sheegay iyo Wariye caana oo ceebeeyay
Xalay waxaan si toos ah u daawanayey khudbad Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu u jeedinayey Soomaalida ku dhaqan Nairobi. Full Article
DHAGEYSO:Ahlusunna oo Heshiis Cusub la Gashay Dowladda Farmaajo?
HORDHAC Full Article
Ethiopia oo 10 Qodob ku sifeysay in lagu ogaan doono Mustaqbalka Madaxweyne Farmaajo & Arimo xasaasi ah oo….
[Xog Cusub:] Madaxweyne Farmaajo oo xil culus u magacaabaya Sheekh Shariif? sidaa waxaa qoray hordhac24.com
[Topnews:-] Fashilka Farmaajo? Al-Shabaab oo faafiyay Magacyadda dadkeey dileen intii Farmaajo Madaxweyne ka noqday Somalia
Waagacusub.net - Warbixin lagu faafiyey baraha Al shabaab ku leeyihiin Internetka ayaa lagu sheegay magacyada la dilay iyo goobaha kale ee la weeraryay inkastoo aysan si rasmi ah u sheegan dilalka qaar in ay masuuliyada iyaga leeyihiin Full Article
[DHAGEYSO:]Xaaska Madaxweyne Farmaajo oo markii u Horeysay la Hadashay Warbaahinta Dowladda?
[Sirculus:-] Akhri Madaxweyne Farmaajo oo Saxiixay heshiis qiyaano qaran
Waagacusub.net - Madaxweyne Farmaajo wuxuu shacabka Soomaaliyeed u sheegay balanqaadyo duuduub ah oo Saudi Arabia u ballanqaadeen Soomaaliya, Madaxweyne Farmaajo isagu maxuu u balan qaaday Sacuudiga? Warbixino la helay! Full Article
[DHAGEYSO:] Afhayeenka Al-Shabaab oo si yaab leh u weeraray Madaxweyne Farmaajo, Sheegayna in...
Afhayeenka Ururka Al-Shabaab Cali Maxamuud Raage "Cali dheere" ayaa markii ugu horeysay ka hadlay Mowqifkooda Dowlada Madaxweyne Maxamed C/llaahi Farmaajo. Full Article